Khatarta muuqata iyo moogganaanta cidday khusayso!!!! | Somaliland.Org
Khatarta muuqata iyo moogganaanta cidday khusayso!!!!
March 28, 2010	Weedhaha u dambeeyay ee dhegaha Bulshada soo gaadhayay ayay ugu waynayd dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Cudur nadaafad-darro iyo daryeel-la’aan Bulsheed sabab u tahay. Waa xannuun sababay dhimashada 6 Caruur ah iyo in ay Cusbatal u galaan in ka badan 70 kale.
Waa Tuulada Toon oo qiyaasihii 65-km dhinaca Koonfurta ka xigta magaalada Hargeysa, waxa Khamiistii ka dillaacay Cudurka Shuban-Biyoodka oo haleelay maati waayo-adduun u goleeyeen oo dhibbane u ah Abaaraha iyo daryeel-la’aanta kale ee u dheer. Waxa gaadhay oo ay heleen Dawooyin iyo taakulooyin kale oo gaadhay waqti in loo gurmadaa ay ka wanaagsanayd in laga hortego Cudurka laga bogsan karo ee dhimashada sida sahalka ah u keenay.
Intii Ilaahay u qaddaray inay ku shafeecdo ee Caruur ah, ayaa u geeriyooday Xannuunkaas. Waxaana wali u jiifa tiro kale oo badan oo ay booqashooyin ugu tageen Masuuliyiin ka socda Xukuumadda iyo Xisbiga UCID.
In Cudur ka mid ah kuwa faafaa uu dillaaco maaha wax cusub, isla markaana canaanteeda cid gaar ah la saari karo, hase ahaatee, waxa Xukuumadda iyo cid kasta oo gacanta ku haysa maamulku eedeedda yeelanaysaa marka gurmad iyo orod aan waqtigiisii la joogin lagula tacaalo cudur si degdeg ah wax u dilaya, halkii ay ka ahayd in laga hortego oo la qaado tallaabooyin lagu hubinayo in la tirtiray waxyaabaha keeni kara Cudurrada sida degdegga ah wax u dila, una faafa. Sababtoo ah, xigmad baa nuxurkeedu ahaa, ka-hortagga ayaa ka wanaagsan daawaynta.
Hargeysa waa caasimadda Somaliland, hase ahaatee, waxay dugsataa waxyaabo badan oo khatar ku keeni kara Nolosha Bulshada ku dhaqan iyo kuwa socotada ku ahba, kuwaas o ay ka mid yihiin Cudurada faafa ee uu hormoodka ka yahay Shubanka iyo kuwa la hal-maalaa. Xashiishka buuxa Biyo-mareenada badhtamaha magaalada ee qaarkood laga soo guray Xashiishkii, lana dhinac tuulay iyaga oo qoyan ka sokow, waxa halis caafimaad-darro ku haya Dooxa wayn ee dhex mara magaalada.
Waa Doox hoy u ah Xashiishka, Hadhaaga Cuntooyinka qoyan ee Hudheellada, Dhiigga iyo Uuska xoolo meelo magaalada ka mid ah lagu qalo iyo Biyo mara waqtiyada Roobabku da’o oo waxaas oo dhan dhammaantood isku qooya. “Urta ka soo baxaysa mararka qaarkood ayaanu dhex mari kari waynaa Dooxa, waxaaba ka sii daran in Fooqa Jajabka ee badhtamaha magaalada, meel aan ka fogayn Xashiishka iyo qudhunka lagu iibiyo Hilibka iyo khudaarta qoyan, taas oo sahli karta inay faafto.” Sidaa waxa tidhi mid ka mid ah Hooyooyinka ku dhaqan Hargeysa ee ay u muuqato khatarta ka dhalan karta caafimaad-darradani.
Biyo-yaraanta soo waajahday Bulshada reer Hargeysa oo ay hore uga hadleen Masuuliyiinta Xukuumadda oo sheegay inay kala badan yihiin dadka ku dhaqan magaalada iyo Biyaha soo galaa, ayaa iyana la odhan karaa waxay fursad kale u yihiin Xannuuno ka dillaaca Magaalada. Si kale aynu u dhigno, Biyoolayaasha ku dhaamiya Gaadhi-Dameerka, ayaa si xidhiidh ah uga dhaamiya Biyaha Ceelal laga qoday badhtamaha Dooxa wayn ee Hargeysa, kuwaas oo deris la ah Xayawaan uu ka mid yahay Eyda oo ka cabba agagaarka goobaha ay ka dhaaminayaan iyo Xashiish iyo qudhun kale oo iyana ay is-weheshadaan Biyaha Ceelashaas. “Markay Biyaha dhaamiyaan waxay geeyaan Guryaha magaalada iyo meelaha aan Biyo helin oo ay ugu sheegaan inay yihiin Biyo Qasabadeed oo nadiif ah, waxaanay uga iibiyaan sidii biyo nadiif ah. Bal ka warama reerka Caruur haysta ee cabba Biyahan aan nadiifta ahayn ee ay Biyoolayaashu dhaaminayaan?” iyana waxa sidaa aragtideeda ku cabbirtay hooyo kale oo aanu kula kulanay shalay badhtamaha Dooxa Hargeysa oo ay ka tallaabaysay.
Waa Ceelal ay ka war qabaan, isla markaana Hawlwadeenada Caafimaadka u qaabilsan Dawladda hoose ee Hargeysa ogyihiin, kana war qabaan in laga dhaamiyo Biyo dadka looga iibinayo inay yihiin Qasabad nadiif ah, walise ma muuqato tallaabooyin wax lagaga qabanayo. Caqliga fayow ma dhigayo in haddii Biyo-yaraani timaaddo, Umadda laga waraabiyo Ceelal Biyo aan daahir ahayni ku jiraan, hase ahaatee, in la joojiyo oo wax laga qabtaa waa masuuliyadda cidda xilka u haysa Bulshada ku dhaqan magaalada.
Waa arrin mudan in cidday khusaysaa hoos u eegto, si looga gaashaanto cudurro ka dhex dillaaca magaalada sii fidaysa ee Hargeysa, taas oo sida muuqata in lala tacaalo oo aan awooddeeda la haynini ay ka toosan tahay in laga hortego, isla markaana tallaabo laga qaado cid kasta oo qayb ka ah ficillada wax yeeli karaya Caafimaadka Bulshada ku dhaqan magaalada iyo guud ahaan magaalooyinka kale ee Dalka oo xaqiiqdu tahay inay jirto meelo la mid ah halkan oo caafimaad-darro ku keeni kara Bulshada. “Waxaanu Xukuumadda, Dawladda hoose ee Hargeysa iyo cid kasta oo kale oo ay khusayso aanu u soo jeedinaynaa in wax laga qabto arrimahan, haddii kale waxa ka dhalan kara dhibaatooyin caafimaad oo dhimasho sababa.” Ayaa ka mid ah aragtiyaha ay Bulshada ku dhaqan Hargeysa, intooda ay u muuqato khatartani kula dardaarmeen cidday khusayso wax-ka-qabashada arrintani.
Xigasho: DIIRADDA WARGEYSKA (Wargeyska Ogaal)
Previous PostXukuumadda Somaliland oo ka hadashay sababta hortaagan in Jabuuti Xafiis Ganacsi ka furato dalkaNext PostMadaxweyne Rayaale oo socdaal aan hore loo shaacin ku tegay magaalada Borama	Blog